March 13, 2017 - Sawirrotv
Daily Archive for: 'March 13th, 2017'
Gaari Qarax laga soo Buuxiyay oo loo Waday Xarunta tababarka Ciidamada ee Janaraal Dhagaban oo la fishiliyay (Dhagayso)
March 13, 2017 – Wararka inaga soo gaaraya xarunta tababarka ciidamada ee Jazeera oo ku taal duleedka Koonfureed ee Magaalada Muqdisho ayaa sheegay in maanta uu halkaasi ka dhacay gaari laga soo buuxiyay waxyaabaha qaraxa. Qaraxan ayaa wuxuu ka dhacay goob Koontarool ah oo ay ku sugan yihiin ciidamada dowladda Federalka Soomaaliya, waxaana markii la …
Qaraxii Xooganaa ee Maanta ka Dhacay Irida Hore ee Hoteel Wehliye ee Magaalada Muqdisho (SAWIRRO)
March 13, 2017 – Warar dheeri ah ayaa ka soo baxaya Khasaaraha dhimashada iyo midka dhaawaca ah ee ka dhashay qaraxii xoogan ee maanta ka dhacay albaabka hore ee Hotel Wehliye ee magaalada Muqdisho. Ciidamada Nabadsugida ee (NISA) ayaa illaa hadda ku mashquulsan gaariga qarxay nooca uu yahay, marka laga soo tago inuu ahaa gaari …
Madaxweyne Donald Trump iyo Gudiga Baarlamaanka Dalkaasi oo ay ka Dhex Tafatay (VIDEO)
March 13, 2017 – Maanta oo Isniin ah ayay ku beegantahay maalintii baarlamaanka dalka Mareykanka uu Madaxweyne Donald Trump u qabtay inuu ugu dambeyn ku keeno cadeymo muujinaya eedeymo culus uu dhawaan usoo jeediyay Madaxweynihii hore ee dalkaasi Barack Obama. Madaxweynaha dalka Mareykanka ee hadda taladahaya ee Donad Trump ayaa ku eedeeyay madaxweynihii hore Barack …
Madaxweyne Trump oo Lagu Dheganyahay (VIDEO)
Donald Trump ayaan ilaa iyo hadda wax cadeymo ah oo ku aadan eedeynta uu u jeediyay in telfoonkiisa dhageestay soo bandhigin, waxana ayna arintan xiisad siyaasadeed ka dhex abuurtay Baarlamaanka dalka Mareykanka. Madaxweyne Donald Trump ayaa iminka ku jira gabasho uu uga dhuumanayo warbaahinta dalka Maraykanka, waxaana la sheegayaa inay hadda ku furmaan eedeymo badan …